Arsenal oo guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Preston North End, una soo gudubtay wareega 4-aad ee FA Cup…+ SAWIRRO – Gool FM
Arsenal oo guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Preston North End, una soo gudubtay wareega 4-aad ee FA Cup…+ SAWIRRO
(Preston) 07 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa guul soo laabasho ah 2-1 kaga soo gaartay naadiga Preston North End, waxaana ay sidaas ugu soo gudubtay wareega 4-aad ee FA Cup.
Kooxda tababare Arsene Wenger ayaa goolka looga naxsaday waxaana 7’daqiiqo bilowgii ciyaarta ugu shubay Callum Robinson, Gunners ayaana ku guuldarreysatay inay iska soo gudo goolkaas qeybtii hore ee ciyaarta sidaas ayaana lagu kala nastay Preston oo ku gacan sarreysay 1-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta Arsenal ayaa goolka barbaraha la timid waxaana laad xoog leh oo uu tuuray u dhaliyey 46’daqiiqo qeybtii labaad ee dheesha Aaron Ramsey, kaasoo kulanka ka dhigay gar isku mid ah 1-1.
Dhammaadkii ciyaarta Arsenal ayaa heshay goolka ay guusha ku qaadatay waxaana 89’daqiiqo u dhaliyey Olivier Giroud, kaddib markii uu dhammaystiray kubbad cirib ahayd oo uu ka caawiyey Lucas Perez, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 ay ku adkaatay Gunners.
Kooxda Arsenal ayaa sidaasi ugu soo baxay wareegga afaraad ee FA Cup.
"Waan ku faraxsanahay inaan soo taabto shabaqa Granada" - Karim Benzema
Barcelona oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro Dele Alli